YEYINTNGE(CANADA): Sunday, March 30
မုံရွာမြို့ သဲသောင်ပြင် မှာ ပြုလုပ်မဲ့ ၅၉(စ) မပြင်ရေး ဟောပြောပွဲရဲ့ နောက်ကွယ် က ဘယ်သူတွေရှိနေတာလဲ
မုံရွာမြို့မုံရွာတောင်ရပ်ကွက်မှာရှိနေတဲ့သဲသောင်ပြင်မှာငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့် နဲ့ ဟောပြောခွင့် ဆိုပြီးတော့ လျှောက်ထားလာတဲ့ လျှေက်လွှာက
ရန်ကုန်မြို့ မှာ နေတဲ့ ဦးနေမျိုးဝေ က မုံရွာကိုမလာဘဲ လျှေက်လွှာက ခြေထောက်ပေါက်ပြီးရောက်လာလေတာလား? မဟုတ် ပါဘူးတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး ထံကနေပြီး ခြေထောက်ပေါက်ပြီးတော့ ရောက်ရှိလာတာပါလို့ မုံရွာမြို့မိ မြို့ဖတစ်ဦးကဆိုလိုက်ပါတယ်။ စုဝေးခွင့် တင်တဲ့ အင်အားက တစ်သောင်း ဆိုတော့
မများလှပါဘူး မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကြီးကြူအင်း နဲ့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီး ညွန့်စိုး တို့က အင်အားများလို့ဆိုပြီးတော့
ဒီတစ်ခါဘာလို့ ဈေးမဆစ်ဘဲပေးလိုက်ကြရတာလည်းအချိန်အတိုင်းအတာအနေနဲ့ကရောကြည့်ပါအုံးတော့နံနက်(၇)နာရီကနေပြီး နေ့လည်(၁)နာရီ
အထိဆိုတော့လုံခြုံရေးပေးဘို့အချိန်များနေလို့ဆိုပြီးတော့ ဈေးမဆစ်ကြတော့ဘဲ ဘာလို့များ လိုလိုချင်ချင်လိုက်ရောလိုက်ကြတာလဲ။တစ်ခြား
ဘာလို့များဈေးမဆစ်ဘဲ သဘောတွေစွတ်ကောင်နေကြရတာလည်း (၂၃)ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့၅၉(စ)ပြင်ရေးလူထုဆန္ဒထုတဖော်ပွဲမှာအင်အား
(၃၅၀၀)တင်တာ များနေလို့ လမ်းကြောင်းရွေးတာများလို့ ဆိုပြီး အကုန်လျှော့ချပစ်ခဲ့တာ ရဲအင်အားမလုံလောက်လို့ ဆိုတော့ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း
မှာဘဲ ရဲအင်အားက နတ် ပြည် ကများ ပို့လွတ်လိုက်လို့ များသွားလေတာလားဗျ ရဲမှူးကြီးတို့ရေ....
ဒီနေညနေမှာမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကအကြီးအကဲကြီးတစ်ဦး ပြောနေတာကတော့ အင်အား(၃၅၀၀)လောက် တိုင်းပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရုံး မှ အဲဒီ
ပွဲကြီးကို တက်ရောက်ဘို့ ရောက်ရှိနေပြီတဲ့ နောက်ပြီးတော့ မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းရှိတဲ့ ရပ်ကွက်ကျေးရွာတွေက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို အင်အား(၃၀) လောက်စီထုတ်ခိုင်းထားတာအခုညနေတော့အင်အားလျှော့တဲ့အနေနဲ့တစ်ရွာတစ်ရပ်ကွက်ကို(၁၂)ယောက်စီဘဲထုတ်ကြရတော့
မယ်ဆိုပါလားဗျာ။ အဲဒီ ပွဲမှာ ပါတဲ့ နောင်တော်လေး ဆိုလားဘဲ အဲဒီသူငယ်က ဘာလဲတစ်ချိန်ကHOTNEWSဂျာနယ်ကအခုလိုမျိုးတွေလုပ်လို့အလုပ်
လို့ မေးလိုက်စမ်းချင်ပါဘိတော့နှယ် .....။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/30/20140အကြံပြုခြင်း
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းကို ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေက ဒီနေ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
ဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေ အဆိုအရ လက်ရှိမူကြမ်းဟာ အရင်ကလိုပဲ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု နဲ့ ဆက်သွားတဲ့ ဥပဒေကြမ်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်တဲ့ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းကို ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေက ဒီနေ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ လှည်းတန်းလမ်းဆုံ၊ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းထဲမှာ ဒီနေ့ညနေ ၃ နာရီကျော်လောက်က ကန့်ကွက်ပွဲကျင်းပခဲ့တာပါ။
စစ်တပ်ကသိမ်းထားတဲ့မြေတွေပြန်ရဖို့ ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံအနားမှာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း မိချောင်းကန်ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားတွေရဲ့ သပိတ်စခန်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့က စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အရပ်သားတချို့ခေါ် လာပြီး အမိုးအကာတွေ အခု မတ်လ ၃ဝ ရက် မနက် ၃ နာရီကျော် မှာ ဝင်ရောက်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
အလားတူ ဝါဝါဝင်းကုမ္ပဏီက မြေသိမ်းထားတာကို သပိတ်စခန်းဖွင့်ဆန္ဒပြနေတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မြန်မာ့ဂုဏ်ရောင်အိမ်ယာ အနီးက သပိတ်စခန်းရဲ့ အမိုးအကာတွေကိုလဲ ဒီမနက် အစောပိုင်းမှာပဲ အာဏာပိုင်တွေက ဝင်ရောက်ဖျက်သိမ်း လိုက်ပါတယ်။
မတ်လ ၃၀ ရက်
နံနက်(၃) နာရီမှာဆူးလေရှိ မိချောင်းကန်သပိတ်စခန်းအား
ရဲတပ်ဖွဲ.များ၊ စည်ပငင်သာယာဝန်ထမ်း၊ နေ.စားအလုပ်သမားများ၊
မတ်လ ၃၀ ရက် မနက် ၇ နာရီမိချောင်းကန်သပိတ်စခန်း
ပြည်သူတွေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန် နံနက်(၃) နာရီမှာ မိချောင်းကန်သပိတ်စခန်းအား
ရဲတပ်ဖွဲ.များ၊ စည်ပငင်သာယာဝန်ထမ်း၊ နေ.စားအလုပ်သမားများ၊ စွမ်းအားရှင်
များမှ ဖြိုဖျက်မှုခံရပြီးနောက် နံနက်(ရ) နာရီမြင်ကွင်းများ။
(Kyaw Soe Naing)
ပြည်သူတွေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန် မတ်လ ၃၀ ရက် နံနက်(၄:၃၀ နာရီ) နာရီမှာ
တာမွေမြို.နယ် မြန်မာ့ဂုဏ်ရောင်သပိတ်စခန်းကိုလည်းအားအင်အားသုံး ဖြိုဖျက်
သမ္မတရဲ့ ပထမဦးဆုံး သမ္မာသမတ် မကျတဲ့ လုပ်ရပ်
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဠ ဦးတင်အေး က မန္တလေး တိုင်း၊ တံတားဦး မြို့နယ် ရွေးချယ်ခံ အမတ် ဖြစ်ပါတယ် ။ အခြေခံ ဥပဒေ ပါ ပြဠန်းချက် အရ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဠဟာ ပါတီနိုင်ငံရေး ကင်းရှင်း ရမယ် လို့ ဖေါ်ပြထားတယ်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ကရော ပါတီဝင် အဖြစ်ကပါ နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး နောက် တနေ့ မှာ သမ္မတက ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဠ အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဦးတင်အေးရဲ့ ပါတီ နိုင်ငံရေးကင်းရှင်းမှုဟာ ၂၄ နာရီ တောင်မပြည့်ခဲ့ဘူး။
တိုင်းပြည်မှာ အရေးအကြီးဆုံးနေရာ တစ်ခု အတွက် သမ္မာသမတ် အကျဆုံးလို့ ယူဆရတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ကို ခန့်အပ်ရမယ့်အစား ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဝင် လွှတ်တော်အမတ် တယောက်ကို ကမန်းကတန်း နှုတ်ထွက်ခိုင်းပြီး ဥပဒေနဲ့ မညီပဲ လက်ဦးမှုရယူ ခန့်အပ်ထားခဲ့ခြင်းဟာ သမ္မတရဲ့ ပထမဦးဆုံး သမ္မာသမတ် မကျတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်အေးက ယူနီဖောင်းနဲ့တုန်းက အမိန့်အရ သိက္ခာမရှိတဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုကိုမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး ဆိုရင်တော့ .... သူ တော်လွန်းတာပေါ့လေ
ဘယ်တုန်းကမှ..မရှိတဲ့ဂရံက... ပျောက်ရတယ်လို့ ။
ဦးသန်းရွှေ ရဲ့သား ထွန်းနိုင်ရွှေ ရဲ့ မြေကွက် ၄၄ ကွက်ရဲ့ ဂရံ တွေ
အိမ်ပြောင်းရင်းနဲ့ ပျောက်သွားလို့တဲ့ ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်ကြပါအုံး...။
အဘဦးဝင်းတင်အတွက် ကုသမှုဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများဆွေးနွေးမှု
၃၀-၃-၂၀၁၄ နေ.လည် (၂း၀၀) နာရီ၊ ရန်ကုန်ပြည်သူ.ဆေးရုံကြီး
အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၏ သုံးသပ်ချက်အရ လူနာ၏အခြေအနေမှာ တိုးတက်မှု
ရှိကြောင်း၊ သို.သော် စိတ်ကျေနပ်လောက်သည့် တိုးတက်မှုမျိုးလည်းမဟုတ်ကြောင်း၊
မနေ.က ICU သို. ရောက်ရှိလာစဉ် ဆိုးဝါးသောအခြေအနေထက် တိုးတက်မှုများ
ရှိကြောင်း၊ ယနေ.တွင် သွေးပေါင်ချိန်၊ နှလုံးခုန်နှုန်းများ ကောင်းမွန်နေကြောင်း၊
ပိုးမ၀င်ရေးအတွက် ပိုးသတ်ဆေးများပေးထားရာ အဖျားဝင်ခြင်းလည်းမရှိကြောင်း၊
လေပြွန်မှလေရှူထုတ်နိုင်မှုမှာ အနည်းငယ်ကောင်းလာကြောင်း၊ ကိုယ်တွင်းရှိ
သို.ဖြစ်ပါသဖြင့် လေပြွန်တပ်ပြီးဆေးထိုးထားသည့် (၇၂) နာရီ ပြည်.အောင်
ဆက်လက် စောင့်ကြည့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပုံမှန်ကုသမှု ကုထုံးများအရဆိုလျှင်
လည်ချောင်းမှလေပြွန်ဖေါက်၍ အသက်ရှူနိုင်အောင် ကုသရမည်ဖြစ်သော်လည်း
လက်ရှိ အနေအထား တိုးတက်မှုအနည်းငယ်ရှိနေခြင်းတို.ကြောင့် စောလျင်စွာ
မလုပ်ပဲ (၇၂) နာရီ အချိန်ပြည့်ကာနီးအထိ ဆက်လက်စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှူမည်
Molly Tin Oo
Ashin dhamar law Ka
လုပ်ချင်ရာ လုပ်လို့ ရတဲ့ ခေတ်ဖြစ်ပါစေ
သတိုးသားက၂၀ သတိုးသမီးက ၆၀တဲ့ ပြောလိုက်
နေမျိုးဝေ နဲ့ ဇေကမ္ဘာ ဦးခင်ရွှေတို့...
by Thunder Pa Yit
မြေကိစ္စတွေမှာ fighting လုပ်ကြတဲ့ပွဲက..
ကောက်ပြီး အိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့
နောက်ပိုင်း လယ်ကိစ္စ မဟုတ်တော့ပဲနဲ့..
ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ နေမျိုးဝေတို့ရဲ့..၅၉ (စ) ထောက်ခံပွဲ ကို
လာရောက် ထောက်ခံအားပေးခဲ့တာကိုလဲ ထူးခြားမှုအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်..၊
ခရိုနီ ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်လောက်ကိုတောင်..
နှစ်လုံးထီ နဲ့ ဘောလုံး ဒိုင်အဟောင်း...
- ဘာသာမဲ့ကနေ အမျိုးဘာသာချစ်အဖြစ်
မုံရွာမြို့ သဲသောင်ပြင် မှာ ပြုလုပ်မဲ့ ၅၉(စ) မပြင်...
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းကို ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေက ဒ...
အဘဦးဝင်းတင်အတွက် ကုသမှုဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများဆွေးေ...